लेक्साप्रो बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ - औषधि बनाम मित्र | सेप्टेम्बर 2021
समाचार, कल्याण कम्पनी, स्वास्थ्य शिक्षा प्रेस कम्पनी औषधि जानकारी समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा, समाचार औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर औषधि जानकारी, समाचार कम्पनी, चेकआउट कल्याण घरपालुवा जनावर
मुख्य >> औषधि बनाम मित्र >> लेक्साप्रो बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
लेक्साप्रो बनाम प्रोजाक: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
यदि तपाइँ उदासिनता, चिन्ता, वा अन्य मानसिक स्थितिको अनुभव गर्नुहुन्छ जुन तपाइँको मानसिक स्वास्थ्यलाई असर गर्दछ, तपाइँ एक्लो हुनुहुन्न। धेरै १ million करोड अमेरिकी वयस्क ठूलो डिप्रेशन डिसआर्डर छ, र लगभग million मिलियन वयस्कहरूको सामान्य चिंताको विकार छ। कोरोनाभाइरसको तनावसँग पनि व्यवहार गर्ने (COVID-19) धेरै मानिसहरूका लागि चिन्ताको ठूलो स्रोत हो।
लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम) र प्रोजाक (फ्लुओक्सेटीन) दुई औषधी हुन् जुन डिप्रेसन र अन्य मनोवैज्ञानिक विकारहरूको लागि प्रयोग गरिन्छ। दुबै एन्टीडिप्रेसस औषधिहरू संयुक्त राज्य खाद्य र औषधि प्रशासन (एफडीए) द्वारा अनुमोदित छ। तिनीहरू औषधीहरूको समूहको एक हिस्सा हुन् जसलाई एसएसआरआईहरू भनिन्छ (सेलेक्टिव सेरोटोनिन रिअपटेक इन्हिबिटरहरू)। एसएसआरआईहरूले दिमागमा सेरोटोनिनको स्तर बढाउँदै काम गर्दछ, जसले अवसादका लक्षणहरू सुधार गर्न मद्दत गर्दछ। यद्यपि दुबै औषधीहरू एसएसआरआई एन्टिडप्रेससन्टहरू हुन्, तिनीहरूमा केही भिन्नताहरू छन्, जुन हामी तल छलफल गर्दछौं।
लेक्साप्रो र प्रोजाक बीचको मुख्य भिन्नता के हुन्?
लेक्साप्रो (एसिटालोप्राम) एक एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन रिअपटेक अवरोधक) हो। यो ब्रान्ड र जेनेरिक फाराममा उपलब्ध छ र ट्याब्लेट वा मौखिक समाधानको रूपमा। सामान्य खुराक दिनको एक पटक १० मिलीग्राम वा २० मिलीग्राम हो।
प्रोजाक (फ्लोक्सेटिन) एक एसएसआरआई हो र ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ। प्रोजाक ट्याब्लेट र क्याप्सूल फारमको साथ साथै मौखिक समाधानमा पनि उपलब्ध छ। खुराक फरक-फरक हुन्छ, तर साधारण डोज २० मिग्रा दिनमा दिनमा एक पटक हुन्छ।
Lexapro र Prozac बीच मुख्य भिन्नता
औषधि वर्ग एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता) एसएसआरआई (छनौट सेरोटोनिन पुनःअपटेक अवरोधकर्ता)
जेनेरिक नाम के हो? Escitalopram फ्लुओक्सेटीन
कुन फार्म (हरू) ड्रग भित्र आउँछ? ट्याब्लेट, समाधान ट्याब्लेट, क्याप्सुल, समाधान
Symbyax को रूपमा Olanzapine संग संयोजनमा
मानक खुराक के हो? १० मिलीग्राम वा २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (खुराक फरक हुन्छ) २० मिलीग्राम एक पटक दैनिक (खुराक फरक हुन्छ)
कसले औषधी प्रयोग गर्दछ? वयस्क र किशोर (१२ बर्ष र माथिका उमेर) बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, वयस्कहरू
Prozac मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
प्रोजाक मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
सर्तहरू लेक्साप्रो र प्रोजाक द्वारा उपचार गरिएको
लेक्साप्रोलाई एमडीडी, वा प्रमुख डिप्रेशन डिसआर्डर (वयस्कहरू र किशोर किशोरीहरूमा १२-१-17 वर्ष उमेरहरूमा) उपचार गर्नका लागि संकेत दिइन्छ। लेक्साप्रो वयस्कहरूमा सामान्यीकृत चिन्ता विकारको उपचारको लागि पनि संकेत गरिएको छ।
प्रोजाक प्रमुख डिप्रेसन डिसआर्डर र बच्चाहरू, किशोर र वयस्कहरूमा जुनूनी बाध्यकारी डिसअर्डरको लागि संकेत गरिएको छ। Prozac7बर्ष भन्दा कम उमेरका बच्चाहरूको लागि प्रयोगको लागि अनुमोदित छैन। प्रोजाक बुलीमिया नर्भोसा, प्रिमेन्स्ट्रल डिस्फोरिक डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको उपचारको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ। Symbyax (जो प्रोजेक, फ्लुअक्सेटीन, र Olanzapine भनिने अर्को औषधि संगै मिल्दोजुल्दो औषधि हो) द्विध्रुवी I अव्यवस्थासँग सम्बन्धित अवसादग्रस्त एपिसोडहरूको उपचार गर्न प्रयोग गरिन्छ र उपचार प्रतिरोधी डिप्रेसनको लागि पनि प्रयोग गरिन्छ।
सर्त लेक्साप्रो प्रोजाक
प्रमुख डिप्रेशन डिसअर्डर (MDD) हो हो
जुनूनी बाध्यकारी डिसऑर्डर (OCD) अफ-लेबल हो
मासिकपूर्व डिस्फोरिक डिसअर्डर हैन हो
द्विध्रुवी I अव्यवस्थासँग सम्बन्धित अवसादग्रस्त एपिसोडहरूको उपचार गर्न olanzapine (Symbyax) को साथ संयोजनमा प्रयोग गरियो। हैन हो
उपचार प्रतिरोधी डिप्रेशन को लागि olanzapine (Symbyax) को साथ संयोजनमा प्रयोग हैन हो
के Lexapro वा Prozac अधिक प्रभावी छ?
एउटा अध्ययन लेक्साप्रोमा अन्य धेरै एन्टिडिप्रेसन्टहरूसँग मिलाएर हेर्यो। लेजाप्रोलाई प्रोजाकसँग तुलना गर्ने क्रममा लेखकहरूले दुबै औषधिहरू समान रूपमा प्रभावशाली पाए।
अर्को अध्ययन , जुन धेरै अध्ययनहरूको समीक्षा हो, एन्टिडिप्रेसेन्टहरूको तुलना गरेर र सुरुमा लेक्साप्रोलाई सम्भवतः अन्य एन्टीडिप्रेससन्टहरू भन्दा बढी प्रभावकारी र राम्रो सहन योग्यको रूपमा भेटियो। जे होस्, जब लेखकहरूले हेड-टू-हेड अध्ययनहरू हेरे र सबै डाटालाई विचार गरे, तिनीहरूले एन्टिडिप्रेसन्ट्स बीच केही फरक पाए।
एन्टिडीप्रेसन्टहरू पूर्ण प्रभावमा पुग्न केहि हप्ता लाग्छ, त्यसैले एन्टीडिप्रेसन्ट लिँदा, यसलाई काम गर्नका लागि केही समय दिन महत्त्वपूर्ण छ। तपाईका लागि सबैभन्दा प्रभावकारी औषधि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक द्वारा मात्र निर्धारण गर्न सकिन्छ, जसले तपाईको मेडिकल ईतिहास र अवस्था (हरू), साथसाथै तपाईले लिनुहुने कुनै पनि औषधीहरू लेक्साप्रो वा प्रोजाकसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन्। कहिलेकाँही यसले औषधि पत्ता लगाउनको लागि थोडा परीक्षण र त्रुटि लिन्छ जुन तपाइँको लागि उत्तम कार्य गर्दछ।
नकारात्मक रगतको प्रकार के हो?
Lexapro मा सबै भन्दा राम्रो मूल्य चाहनुहुन्छ?
लेक्साप्रो मूल्य सचेतका लागि साइन अप गर्नुहोस् र जब मूल्य परिवर्तन हुन्छ फेला पार्नुहोस्!
कभरेज र लेक्साप्रो बनाम प्रोजाकको लागत तुलना
लेक्साप्रो सामान्यतया बीमा र मेडिकेयर भाग डी द्वारा कभर गरिएको छ। जेनेरिक संस्करणमा सामान्यतया धेरै कम कोपे हुन्छ, जबकि ब्रान्ड-नाम संस्करणमा प्राय: धेरै धेरै प्रतिलिपि हुन्छ वा सबैमा कभर नहुन सक्छ। लेक्साप्रोको 30० को लागी $99 10, १० मिलीग्राम ब्रान्ड-नाम ट्याब्लेट वा 30०, १० मिग्रि जेनेरिक टेबलेटको लागि $ $० को लागत। तपाईं जेनेरिक लेक्साप्रो प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ १ little भन्दा कमको लागि सिंगलकेयर कार्डमा सहभागी फार्मेसीहरूमा।
प्रोजाक पनि सामान्यतया बीमा र मेडिकेयर पार्ट डी द्वारा कभर गरिएको छ; सामान्य छनौट गर्दा ठूलो पैसाको बचत हुनेछ। ब्रान्डमा सामान्यतया धेरै धेरै प्रतिलिपि हुन्छ वा कभर हुन सक्दैन। प्रोजाकको लागत $०० को लागि $ costs००, २० मिग्रि ब्रान्ड नाम क्याप्सुल, वा ,०, mg० मिलीग्राम जेनेरिक क्याप्सूलको लागि $ over० भन्दा बढी। तपाईं जनेरिक प्रोजेक किन्न सक्नुहुनेछ $ at मा शुरू गरी केहि फार्मेसीहरुमा जसले सिंगलकेयर कूपन स्वीकार गर्दछ।
मानक खुराक # ,०, १० मिलीग्राम ट्याब्लेटहरू # ,०, २० मिलीग्राम क्याप्सूल
विशिष्ट मेडिकेयर पार्ट डी कोपे $ ०- $ .० $ ०- $ १२
एकलकेयर लागत $ १-- $ .० $ - $ २०
लेक्साप्रो बनाम प्रोजाकको साझा साइड इफेक्टहरू
लेक्साप्रोको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, मतली, यौन समस्या, निन्द्रा, र अनिद्रा हो।
प्रोजाकको सबैभन्दा सामान्य साइड इफेक्टहरू भनेको टाउको दुखाइ, मतली, निन्द्रा, अनिद्रा, भोक कम हुनु, र घबराहट / चिन्ता हो।
लेक्साप्रो वा प्रोजाकको प्रत्येक नयाँ वा रिफिल प्रिस्क्रिप्शनको साथ, तपाईंले एक औषधि गाइड प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन साइड इफेक्टहरू, चेतावनीहरू, र अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरूको बारेमा छलफल गर्दछ।
यो साइड इफेक्ट को पूर्ण सूची छैन। अन्य प्रतिकूल प्रभावहरू हुन सक्छन्। साइड इफेक्टहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
टाउको दुखाई हो २%% हो एक्काइस%
मतली हो १%% हो एक्काइस%
स्खलन विकार / यौन रोग हो १%% हो % रिपोर्ट गरिएको छैन
सुख्खा मुख हो %% हो १०%
तन्द्रा हो १%% हो १%%
अनिद्रा हो १२% हो १%%
भोक कम गर्नु हो % रिपोर्ट गरिएको छैन हो एघार%
नर्वस / चिन्ता हैन - हो १२-१-13%
स्रोत: डेलीमेड ( लेक्साप्रो ), डेलीमेड ( प्रोजाक )
लेक्साप्रो बनाम प्रोजाकको ड्रग अन्तर्क्रिया
किनभने दुबै औषधि एकै कोटीमा छन्, उनीहरूसँग समान ड्रग अन्तर्क्रिया छ।
MAOIs (monoamine oxidase inhibitors) लेक्साप्रो वा Prozac को १ days दिन भित्र प्रयोग गर्नु हुँदैन। संयोजनले जोखिम बढाउन सक्छ सेरोटोनिन सिन्ड्रोम , सेरोटोनिनको निर्माणको कारण एक जीवनलाई जोखिममा पार्ने चिकित्सा आपतकालिन। ट्राइप्टनहरूले माइग्रेनको उपचार गर्थे, जस्तै इमिट्रेक्स (सुमात्रीप्टन), साथै अन्य एन्टीडिप्रेससहरू, जस्तै इलाभिल वा साइम्बाल्टा, सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको जोखिमको कारण लेक्साप्रो वा प्रोजाकसँग संयोजनमा प्रयोग गर्नु हुँदैन। साथै, खोकी सप्रिएन्ट डेक्सट्रोमर्थोर्फन, जुन रोबिटसिन-डीएममा पाइन्छ साथसाथै अन्य खोक्रा र चिसो उत्पादनहरू पनि हटाउनुपर्दछ किनकि यसले लेक्साप्रो वा प्रोजाकसँग मिलाउँदा सेरोटोनिन सिन्ड्रोम निम्त्याउन सक्छ।
के बलियो tylenol3वा विकोडिन छ
अन्य ड्रग्स जसले लेक्साप्रो वा प्रोजाकसँग अन्तर्क्रिया गर्न सक्दछन् म्याक्रोलाइड एन्टिबायोटिकहरू जस्तै Zithromax, NSAIDs (नन-स्टेरॉइडल एन्टी-इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स) जस्तै आईबुप्रोफेन, वा पेन्टकिलरहरू जस्तै अल्ट्राम (ट्रामाडोल)। Lexapro वा Prozac लिनुहुँदा मद्य पिउनु हुँदैन।
यो औषधी अन्तरक्रियाको पूर्ण सूची होइन। औषधी अन्तरक्रियाहरूको पूर्ण सूचीको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
औषधि ड्रग क्लास लेक्साप्रो प्रोजाक
Tranylcypromine MAOIs हो (कम्तिमा १ days दिन द्वारा अलग प्रयोग) हो (कम्तिमा १ days दिन द्वारा अलग प्रयोग)
एरिथ्रोमाइसिन म्याकोराइड एन्टिबायोटिक हो हो
Vinblastine ड्रग्स एन्जाइम CYP2D6 द्वारा मेटाबोलिज हो (कम्तिमा पाँच हप्ता द्वारा अलग प्रयोग) हो (कम्तिमा पाँच हप्ता द्वारा अलग प्रयोग)
Lexapro र Prozac को चेतावनी
सबै एसएसआरआईहरू, लेक्साप्रो र प्रोजाक सहित, आत्महत्याको बक्स गरिएको चेतावनी छ। बच्चाहरू, किशोर-किशोरीहरू, र युवा वयस्कहरू (२ 24 बर्ष उमेर सम्म) जसले एन्टिप्रेप्रेसन्टहरू लिन्छन् उनीहरूसँग आत्महत्या गर्ने विचार र व्यवहारको जोखिम बढी हुन्छ। एन्टीडिप्रेसन्ट्समा सबै बिरामीहरूलाई होशियारी अनुगमन गरिनु पर्छ।
सेरोटोनिन सिन्ड्रोम एक गम्भीर, जीवन-जोखिमको आपतकाल हो जुन धेरै सेरोटोनिनको निर्माणको कारणले हुन्छ। लेक्साप्रो वा प्रोजाक लिने बिरामीहरूलाई सेरोटोनिन सिन्ड्रोमका लक्षणहरू र भ्रम, दौरा र आन्दोलनको लागि सावधानीपूर्वक अनुगमन गरिनु पर्छ। यदि यी लक्षणहरू देखा पर्दछ भने बिरामीहरूले आपतकालीन चिकित्सा उपचार लिनु पर्छ। सेरोटोनिनको स्तर बढाउने अन्य औषधी लिने बिरामीहरू (ट्राइप्टन, ट्राइसाइक्लिक एन्टिडिप्रेसन्ट्स, फेन्टानेल, लिथियम, ट्रामाडोल, ट्रिप्टोफन, बसपिरोन, डेक्सट्रोमर्थन, एम्फटामाइन्स, सेन्ट जोन्स वर्ट, र एमएओआई) सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको लागि बढी जोखिममा छन्।
जब लेक्साप्रो वा प्रोजाक बन्द गर्दै, फिर्ती लक्षणहरू जस्तै आन्दोलन देखा पर्न सक्छ। बिरामीहरूले औषधीको बिस्तार बिस्तार बिग्रनु पर्छ र अचानक कहिल्यै रोकिनु हुँदैन। तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक लेक्साप्रो वा प्रोजाक बन्द गर्न उत्तम तरिकामा सल्लाह दिन सक्छ।
दौरा भएका बिरामीहरूमा, Lexapro वा Prozac सावधानीका साथ प्रयोग गर्नु पर्छ।
हाइपोनाट्रेमिया (कम सोडियम) अनुचित antidiuretic हार्मोन स्राव (SIADH) को सिंड्रोमको कारण हुन सक्छ। बिरामीहरूले टाउको दुख्ने, ध्यान केन्द्रित गर्न कठिनाई, मेमोरी कमजोरी, भ्रम, कमजोरी, र अस्थिरता, जो झर्ने निम्त्याउन सक्छ। अधिक गम्भीर केसहरू हुन सक्छन्। बिरामीहरूले आपतकालिन उपचार खोज्नु पर्छ यदि लक्षण देखा पर्दछ, र एसएसआरआई बन्द गरिनु पर्छ।
उपचार नगरी anatomically स narrow्केत कोण (कोण-बन्द ग्लूकोमा) को साथ बिरामीहरुमा SSRIs लाई त्याग्नु पर्छ।
एसएसआरआईले रक्तस्राव जोखिम बढाउन सक्छ। जोखिम बढाउने एस्पिरिन, NSAIDs, वा warfarin को एक साथ प्रयोग संग।
उन्माद वा hypomania को सक्रियता हुन सक्छ। द्विध्रुवीय डिसअर्डर भएका बिरामीहरूमा एन्टिडिप्रेसन्टले मिश्रित / मैनिक एपिसिपेटीट गर्न सक्छ।
ड्राइभ वा मेसिनरी संचालन नगर्नुहोस् जबसम्म तपाइँ लेक्साप्रो वा प्रोजाकले तपाईंलाई कसरी असर गर्छ भनेर थाहा पाउनुहुन्छ।
विरलै अवस्थाहरूमा, त्यहाँ पुराना र एलर्जी प्रतिक्रिया / प्रणालीगत एनाफिलाक्सिस प्रतिक्रियाहरूको रिपोर्ट आएको छ, जुन घातक हुन सक्छ। यदि तपाईं दाग वा एलर्जीको लक्षण अनुभव गर्नुहुन्छ भने, लेक्साप्रो वा प्रोजाक लिन बन्द गर्नुहोस् र तुरुन्तै चिकित्सा उपचार लिनुहोस्।
एसएसआरआईले विशेष गरी कम तौल भएको निराश बिरामी वा बुलिमिक बिरामीहरूमा प्रोजेकको साथ अधिक वजन घटाउन सक्छ। उपचारको क्रममा वजनमा परिवर्तनको अनुगमन गरिनु पर्छ।
लेक्साप्रो वा प्रोजाकले QT लम्बाइ र भेंट्रिकुलर एरिथिमिया निम्त्याउन सक्छ। केहि बिरामीहरूलाई चिकित्सा अवस्था वा अन्य औषधीको कारण उच्च जोखिम हुन्छ। तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायक लाई सोध्नुहोस् यदि Lexapro वा Prozac तपाइँको लागी सुरक्षित छ।
प्रोजाक चिन्ता, घबराहट, वा अनिद्रा हुन सक्छ।
लेक्साप्रो वा प्रोजाक केवल गर्भावस्थामा मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ यदि आमालाई फाइदा बच्चामा हुने जोखिम भन्दा बढी छ। औषधी रोक्दा डिप्रेसन वा चिन्ताको फड्को हुन सक्छ। त्यसकारण, बिरामीहरूलाई केस-द्वारा-केस आधारमा मूल्या should्कन गर्नुपर्छ। तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकले गर्भावस्थामा एसएसआरआई प्रयोग गर्दा हुने जोखिम र जोखिमको तौल लिन सक्नुहुन्छ। तेस्रो त्रैमासिकमा एसएसआरआईमा देखा परेका नवजातहरूले लामो समयसम्म अस्पतालमा भर्ना हुनु, श्वासप्रश्वास समर्थन, र ट्यूब खुवाउन जटिलताहरू विकास गरेको छ। यदि तपाईं पहिले नै लेक्साप्रो वा प्रोजाकमा हुनुहुन्छ र तपाईं गर्भवती भएको पत्ता लगाउनुहुन्छ भने, तुरून्त तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सम्पर्क गर्नुहोस्।
लेक्साप्रो बनाम प्रोजाकको बारेमा प्राय: सोधिने प्रश्नहरू
लेक्साप्रो भनेको के हो?
लेक्साप्रो एक एसएसआरआई हो (चयनित सेरोटोनिन रिअपटेक अवरोधक) जुन डिप्रेसन र चिन्ताको लागि प्रयोग गरिन्छ। यो दुबै ब्रान्ड र जेनेरिक (एसिटालोप्राम) मा उपलब्ध छ।
प्रोजाक एक एसएसआरआई हो जसले डिप्रेसन, जुनूनी बाध्यकारी डिसअर्डर, बुलीमिया नर्भोसा, प्रिमेन्स्ट्रियल डिसफोरिक डिसअर्डर, र पैनिक डिसअर्डरको उपचार गर्दछ। यसको जेनेरिक नाम फ्लुओक्सेटीन हो। Prozac ब्रान्ड र जेनेरिकमा उपलब्ध छ।
रुघाखोकी लाग्दा कस्ता खानेकुरा खाने
के लेक्साप्रो र प्रोजाक एकै हो?
Lexapro र Prozac दुबै प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स को SSRI कोटि हो। ती समान छन्, तर वास्तवमा उस्तै छैन। उनीहरूसँग केही भिन्नताहरू छन्, जसरी माथि वर्णन गरिए। अन्य एसएसआरआई ड्रग्समा तपाईंले सुन्नु भएको हुन सक्छ सेलेक्सा (साइटोलोप्राम), लुभोक्स (फ्लोभोक्सामिन), पक्सिल (प्यारोक्सेटिन), र जोलोफ्ट (सेर्टरलाइन)।
तपाईंले सुन्नु भएको अर्को ड्रग्स को लागी सुन्न सक्नुहुन्छ ड्रग्सको SNRI क्लास, जसमा सिम्बाल्टा (ड्युलोक्सेटिन), एफफेक्सोर (भेन्लाफैक्साइन), र प्रिस्टीक (डेसेन्लाफैक्सिन) पर्छ।
Lexapro वा Prozac राम्रो छ?
अध्ययन (माथि हेर्नुहोस्) लेक्साप्रो र प्रोजाक समान प्रभावशाली हुने देखाउँदछ। तपाईंको हेल्थकेयर प्रदायकसँग परामर्श गर्नुहोस्, जसले तपाईंलाई लेक्साप्रो वा प्रोजाक तपाईंको लागि उत्तम विकल्प हुन सक्दछ निर्धारण गर्न मद्दत गर्न सक्दछ।
के म गर्भवती हुँदा लेक्साप्रो वा प्रोजाक प्रयोग गर्न सक्छु?
यो निर्भर गर्दछ सल्लाहको लागि तपाईंको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई परामर्श दिनुहोस्। ऊ वा उनीले बच्चालाई एन्टीडिप्रेससन्ट बनाउने जोखिम बनाउने फाइदाहरू तौलने छन्। नवजात शिशुहरुमा एन्टिडिप्रेसेन्टहरु लाई सम्पर्क गरिएको छ जसमा एसएसआरआई सहित गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिकमा जटिलताहरु देखा परेका छन।
यदि तपाईं पहिले नै लेक्साप्रो वा प्रोजाकमा हुनुहुन्छ र तपाईं गर्भवती हुनुहुन्छ भन्ने फेला पार्नुभयो भने सल्लाहको लागि तुरून्त तपाईंको OB-GYN बाट परामर्श लिनुहोस्। यदी तिमी स्तन पान , आफ्नो OB-GYN साथ पनि परामर्श गर्नुहोस्।
के म रक्सीको साथ लेक्साप्रो वा प्रोजाक प्रयोग गर्न सक्छु?
होइन। लेक्साप्रो वा प्रोजाक रक्सीको साथ सेवन गर्नु हुँदैन, किनकि यसले श्वासप्रश्वासको उदासीनतालाई कम गर्न (सास फेर्न ढिलो हुनु, पर्याप्त अक्सिजन पाउनु हुँदैन) र बेहोरापन र निद्रा र कमजोर सतर्कता बढाउन सक्छ। संयोजन पनि चिन्ता र / वा निराशा बढ्न सक्छ।
चिन्ताको लागि सब भन्दा राम्रो एसएसआरआई कुन हो?
जबकि बेन्जोडियाजेपाइनहरू जस्तै झान्याक्स (अल्प्रजोलम) चिन्ताको अल्पकालिक उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, एसएसआरआईहरू प्रायः चिन्ताको लागि दीर्घकालीन उपचारको रूपमा दिइन्छ। उत्तम एसएसआरआई चिन्ताका लागि, यद्यपि त्यो एक हो जुन तपाईंको लागि उत्तम हो। तपाइँको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकलाई सोध्नुहोस् कि यदि एक एसएसआरआई तपाइँको चिन्ताको उपचार गर्न मद्दत गर्दछ।
के प्रोजाक चिन्ताको लागि राम्रो छ?
डिप्रेसन र अन्य सर्तहरूको लागि संकेत गरिएको, प्रोजाक कहिलेकाँही चिन्ताको लागि अफ-लेबल निर्धारित गरिन्छ। क्लिनिकल अध्ययनहरूमा, प्रोजाक लिने १२% देखि १%% बिरामीले घबराहट वा चिन्ता महसुस गरे। चिकित्सा सल्लाहका लागि तपाईको स्वास्थ्य सेवा प्रदायकसँग परामर्श लिनुहोस्।
के प्रोजाकले तपाईंलाई चिन्तित बनाउन सक्छ?
प्रोजाकको स्नायु प्रणालीमा केहि साइड इफेक्टहरू हुन सक्छन् जस्तै अनिद्रा, कम्पन, चिन्ता, वा घबराहट, जसले तपाईंलाई चिन्तित तुल्याउन सक्छ। यद्यपि कम्पन, द्रुत मुटुको धडकन, वा आन्दोलनको लक्षणहरू महसुस गर्नु सेरोटोनिन सिन्ड्रोमको लक्षण हुन सक्छ (चेतावनीको लागि माथि हेर्नुहोस्)। यदि तपाईं मानसिक स्थिति वा समन्वयमा परिवर्तन देख्नुहुन्छ, मुटुको दर वा रक्तचापमा परिवर्तन, र / वा GI (जठरांत्र) लक्षण जस्तै डाईरिया, यो संभवतः सेरोटोनिन सिन्ड्रोम हुन सक्छ। यो जीवन जोखिमपूर्ण हुन सक्छ, त्यसैले आपतकालीन चिकित्सा सहायता खोज्नुहोस्।
लेक्साप्रो बनाम जोलोफ्ट
जोलोफ्ट बनाम प्रोजाक
लेक्साप्रो बनाम Xanax
Qvar बनाम फ्लोभन्ट: भिन्नता, समानताहरू, र जुन तपाईंको लागि राम्रो छ
के जेनेरिक औषधिहरू ब्राण्ड-नाम औषधि जतिकै राम्रो छन्?
भिटामिन डी कती सुरक्षित छ
के म २४ घण्टा एलिग्रा संग बेनाड्रिल लिन सक्छु
किन स्याउ साइडर तपाइँको लागी राम्रो छ
चिया रूख को तेल खमीर संक्रमण मा मद्दत गर्दछ
चीजहरु कि औषधि परीक्षण मा गलत सकारात्मक कारण
कम tsh को मतलब के हो?